Imidlalo yeCrunchyroll yokushicilela iMob Psycho 100: Psychic Battle '- IZINDABA - Okunye
ICrunchyroll Games imemezela namuhla ukuthi izoshicilela 'I-Mob Psycho 100: Impi ye-Psychic' - Umdlalo weselula we-RPG wokuqala, osuselwe emuva ovumela abalandeli ukuthi basebenzisane futhi basebenzise ukuhamba okunamandla kwengqondo eceleni kwezinhlamvu zabo abazithandayo ezivela kulo mdlalo.
Kutholakala emhlabeni jikelele ku-Crunchyroll, 'I-Mob Psycho 100' uchungechunge olungaphezu kwamandla emvelo olulandela impilo yengqondo enamandla enamandla ezama ukugcina amandla ayo elawulwa ngenkathi kulinganiswa isikole esiphakathi nenkinga eqhubeka nokuza kuye.
I-Mob Psycho 100: Impi ye-Psychic izofaka abalingisi bezwi boqobo futhi izolandela izinto ezikhethiwe kusukela kusizini yokuqala yombukiso. Ngaphezu kwalokho, umdlalo uzoba nemidwebo ephelele ye-3D, futhi izovumela abadlali ukuthi bakhe iqembu labalingiswa babo abathandayo abahlanu be- 'Mob Psycho 100'.
Umlingiswa ngamunye uzoba nesethi yokuhambisa ekhethekile kanye nokusikeka okuhambisanayo kwe-animated ngaphambi kokuhlaselwa kwabo okukhethekile.
Abadlali bazophinde babe nethuba lokuhlola nokulwa ezindaweni zakudala ezivela endaweni yonke ye- 'Mob Psycho 100'.
Umdlalo uhlelelwe ukwethulwa e-Autumn 2019 futhi uzotholakala ezindaweni ezilandelayo: i-US nezindawo zayo, i-Australia, iNew Zealand, iCanada, iDenmark, iFinland, iFrance, iJalimane, i-Ireland, iNetherlands, iNorway, iSweden ne-United Umbuso. Abadlali bangakwazi bhalisela umdlalo ngaphambilini.
Ukwethulwa kwalo mdlalo omusha kuyingxenye yokuzibophezela okubanzi kukaCrunchyroll ekwakheni isamba esigcwele samava angama-360-degree ukujulisa ukuzibandakanya komphakathi ngemibukiso abayithandayo.
Ku- 'Mob Psycho 100,' iCrunchyroll inika abalandeli izindlela zokuthinta ezahlukahlukene ukuze bahlanganyele nochungechunge.
Lokhu kufaka okuthengiswayo, ngamaqoqo we-capsule aklanywe ngokukhethekile ku Isitolo se-Crunchyroll nezembatho ezivela kozakwethu abahlukahlukene, imicimbi efana neCrunchyroll Movie Night, elethe ukukhonjiswa kwe- “Mob Psycho 100 II” e-U.S.
Futhi iCrunchyroll Expo, ingqungquthela ephethwe yipulatifomu ezofaka ithalente elihlukahlukene le- 'Mob Psycho 100' njengezivakashi kulo nyaka, imithombo yezokuxhumana ngamakhasi ombukiso nezinhlelo zedijithali Imimoya futhi enjalo , phakathi kokunye okuningi.
Ngenkathi uhlelo lusakaza iziqephu ezintsha ku-Crunchyroll, i- 'Mob Psycho 100' ibingenye yochungechunge oludume kakhulu lwe-simulcast phambilini. Zombili izinkathi ze- 'Mob Psycho 100' ziyatholakala ukusakazwa ku-Crunchyroll manje.
Indawo yokubhalisa ngaphambilini:
I-Mob Psycho 100 Game